आफ्नै मजाक बनाएर हाँस्ने व्यक्ति धेरै बाँच्ने | Makalukhabar.com
आफ्नै मजाक बनाएर हाँस्ने व्यक्ति धेरै बाँच्ने
भाद्र १९ । प्रकृतिले मान्छेमा हाँस्ने र रुने दुवै गुण दिएको छ । हामी जुनसुकै बाहनामा पनि हाँस्न सक्छौ । जब हाँस्छौ, दिल खोलेर हाँस्नुपर्छ । हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि निक्कै फाइदाजनक हुन्छ । भनिन्छ नि जति हाँसिन्छ उति नै बाँचिन्छ ।
मुस्कुराउँदा वा हाँस्दा के हुन्छ ? मन प्रशन्न हुन्छ । मन प्रशन्न हुनु भनेको हृदयलाई स्वस्थ्य राख्नु हो । मस्त हाँस्दा शरीरका भित्री अंगहरुको व्यायाम हुन्छ । रक्तसंचार राम्ररी हुन पाउँछ । शरीरभित्र अक्सिजन पर्याप्त पुग्न पाउँछ । अनुहारको मांसपेशीको व्यायाम हुन्छ । आसपासको माहौल रमाइलो बन्छ । मनमा सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ । पिर, चिन्ता, तनाव, कुण्ठा हराउँछ । भनिन्छ, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
एक अध्ययनको अनुसार आफैंमाथि चुट्किला भनेर हाँस्ने व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्य गज्जब हुने पत्ता लागेको छ । योगी विकासानन्दले त्यसै भनेको होइनन्, ‘जसले हाँस्न जानेको छैन, उसले बाँच्न पनि जानेको छैन ।’ असली जीवनको स्वाद लिनका लागि मस्त हाँस्न पनि जान्नुपर्छ । अक्सर स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त, प्रशन्न, सकारात्मक व्यक्तिहरु हाँसिरहेका हुन्छन् ।
यसरी हाँस्न सकिन्छ :
– बिहान मस्त हाँसेपछि शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्ति हुन्छ । रक्त प्रवाह राम्ररी हुन्छ । मन प्रशन्न हुन्छ । सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ ।
-हरेक बिहान ऐनाको अघिल्तिर उभिएर स्वभाविक रुपमा हाँस्ने अभ्यास गरौं । हाँस्दा अनुहारमा बेग्लै चमक आउँछ । यो अभ्यासले प्राकृतिक रुपमै हामीलाई हाँस्ने बानी लगाउँछ ।
-कति व्यक्तिको स्वभाव नै हुन्छ, हाँस्ने । उनीहरु हरबखत हाँसिरहेका हुन्छन्, मुस्कुराइरहेका हुन्छन् । ति व्यक्तिहरुको संगत गरौं ।
-चाहे घरमा होस्, चाहे कार्यलयमा, एउटा यस्तो साथी बनाउनुपर्छ, जोसँग ख्याल ठट्टा गरिरहन सकियोस् । कुनै न कुनै बाहनामा चल्ने, जिस्कने, ठट्टा गर्ने अभ्यास गरौं ।
-हामीले धेरैजसो समय बिताउने भनेको परिवारसँग नै हो । दुखसुखको साझेदार पनि परिवार नै हो । त्यसैले परिवारमा हाँसो ठ्टटा गर्ने अभ्यास गरौं । एजेन्सी
प्रेममा धोका पाउनु भएकाे छ भने तनावबाट मुक्त हुन अपनाउनुस् यी टिप्स
टाउको काटेको १८ महिना सम्म पनि कुखुरा जिवितै भएपछी...
फागुन १५ । आजभन्दा ७२ वर्ष पहिला अमेरिकामा मिरेकल माइक नामको एउटा कुखुरा टाउको काटेपछि पनि १८ महिनासम्म जिउँदै थियो । यो कुराले अहिले पनि मानिसहरु अचम्ममा पर्छन् ।यो घटना १० सेप्टेम्बर सन् १९४५ को हो । अमेरिकाको कोलाराडास्थित फ्रुटामा बस्ने एक किसान लायड ओल्सेन आफ्नी श्रीमती क्लाराका साथमा आफ्नो फर्... जारी राख्नुहोस...
आफ्नो झनक्क रिसाउने बानीलाई यसरी कन्टोल गर्नुस्
फागुन १४ । हामी मान्छे अनुसार स्वभाव सबैको फरक ,फरक पाउछौ । कोइ शान्त स्वभावका हुन्छौ,कोइ रिशालु । आफ्नो स्वभावका कारण पनि हामि धेरै ठाउमा समस्यामा परिरहेका हुन्छौ । तर हामीले आफ्नो व्यवहार ठाउँअनुसार परिवर्तन गर्नसकेमा मात्र हामी अगाडी बढ्न् सक्छाैँ ।जस्तै कुन समय के बोल्ने, कुनै मानिसलाई केहि कुरा... जारी राख्नुहोस...
मानिसको जस्तै अनुहार भएको बिरालो जन्मिएपछी..
फागुन १३। केही दिनयता सामाजिक सन्जालमा मानिसको अनुहारजस्तै भएको एउटा बिरालोको तस्बिर निकै ‘भाइरल बनिरहेको छ । दाबी गरिए अनुसार उक्त बिरालो मलेसियामा जन्मिएको हो । यो पनि बताइएको छ कि, यसको अनुहारको बनावट ठ्याक्कै मानिसकै जस्तो छ । त्यत्ति मात्रै कहाँ हो र १ यसलाई अहिले एक ल्याबमा राखिएको छ ।तर, मलेस... जारी राख्नुहोस...
एकछिनमा बिर्सने बानी छ ? अब यसरी स्मरण शक्ति बढाउनुहोस्
फागुन १३ । कहिलेकाँही कुनै व्यक्ति वा स्थानको नाम जति सम्झिन खोजेपछि यादै आउँदैन । यस्तो धेरैजनालाई भएको हुनुपर्छ । उमेर बढेसँगै मानिसहरुको स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने बताइन्छ । यस्तो साँच्चै हुन्छ पनि तर दिमागलाई तन्दरुस्त राख्न सकिन्छ ।यदि तपाईं आफ्नो दिमागी क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ उल्ले... जारी राख्नुहोस...
जन्मने बित्तिकै नवजात शिशु चिकित्सकसँग रिसाएपछी...
फागुन १२, काठमाडौं । ब्राजिलमा एक शिशु जन्मनासाथ चिकित्सकसँग रिसाएको तस्बिर हाल सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । ब्राजिलको रियो दे जेनेरोमा शल्यक्रिया गरेर भर्खर जन्मिएको शिशुलाई चिकित्सकले रुवाउन खोज्दा रिसाएको देखिएको छ ।शिशुको फोक्सोले काम गरिरहेको छ कि छैन् भनि जाँच गर्न शिशुलाई रुवाउन खोज्दा शिश... जारी राख्नुहोस...
११ वर्षिया छोरीकाे मोबाइल आमाबाबुले हेर्दा उड्याे होसहवास
फाइल फाेटाेफागुन ११। चीनमा एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिएका थिएनन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई थाहा भयो कि छ... जारी राख्नुहोस...
महिलासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु छ भने यी कुराहरु बिर्सेर पनि नसोध्नुहोस्
फागुन ११ । महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सदियौं देखि बहस र विवादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुनासो नयाँ कुरा होइन । तर महिलासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।१. के म तिमीलाई चुम्बन गर्न सक्छु ?कहिल्यै पनि म... जारी राख्नुहोस...